inqaba yensimbi engu-angular Abavelisi - China inqaba yentsimbi ye-angular Factory, ababoneleli
25m 3-Legs Lattice Steel Tower Telecommunication Tower
Jonga apha, eyona nqaba inkulu yonxibelelwano lwentsimbi, intengiso kunye ne-exporeter yasemazantsi china.factory ngqo, umgangatho garanti.trade ukuchaneka.
Iinkonzo zoyilo oluqhelekileyo ezikhoyo, BUZA NGOKU!!!
I-15m yeNqaba yoNxibelelwano yeMicrowave yeMicrowave
Fumana apha, umvelisi omkhulu wentsimbi yonxibelelwano ngocingo, intengiso kunye ne-exporeter yasemzantsi china.factory ngqo, umgangatho garanti.trade ukuchaneka.
50m Angle Steel Cellular Mobile Telecom Tower
Fumana apha, umvelisi wenqaba enkulu yonxibelelwano, intengiso kunye ne-exporeter yasemazantsi. Umzi-mveliso waseChina ngokuthe ngqo, isiqinisekiso somgangatho.
25m Self Ukuxhasa iAngular Telecom Tower
Fumana apha, umzi-mveliso omkhulu wentsimbi yonxibelelwano lwentsimbi, intengiso kunye ne-exporeter yasemazantsi. Umzi-mveliso waseTshayina ngokuthe ngqo, isiqinisekiso somgangatho.
20m Factory ngqo eGatiweyo Angular Telecom Steel Towers
Umenzi wenqaba yensimbi yaseTshayina yobuchwephesha, umboneleli kunye nomthengisi ngaphandle, Sibonelela ngeyona nkonzo yentsimbi yokumisa enye yokumisa ukuthunyelwa kumazwe angaphandle kolwandle, ngakumbi kwimveliso yentsimbi yentsimbi yonxibelelwano kunye noyilo olulungiselelweyo.
35m CE Certificated Telecom Steel Lattice Tower
Qhagamshelana ne-US ngokukhawuleza ngeenkcukacha ezithe kratya !!!
60m iAngle Steel Lattice Telecom Tower
I-XYTOWER ngumvelisi wenqaba yentsimbi echwepheshile e-China, Sibonelela ngeyona nkonzo yentsimbi enobuchwephesha yokumisa enye yokuthumela kumazwe aphesheya kolwandle, ingakumbi kwimveliso yentsimbi yentsimbi yonxibelelwano.
60m yeAngular Steel Microwave Antenna Telecom Tower